Warar ku saabsan ganacsatada | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Dhamaan wararka ku saabsan ganacsatada Heer qaran iyo heer caalami. Inuu noqdo ganacsade Waa hawl aad u dhib badan, qaybtaan waxaan kugu wargalineynaa dhammaan wararka ganacsatada waaweyn ee dalkeenna, iyo sidoo kale dhammaan wararka iyaga taabanaya (kaabista, kaalmada dawladda, isbeddelada sharci dejinta, sharciyada shaqada, siyaasadaha dhiirigelinta, shirarka ganacsatada, naadiyada ganacsatada, iwm).
Haddii aad tahay ganacsade, sida aad jeceshahay inaad noqoto ama haddii aad si fudud u rabto inaad la socoto wararka ku soo kordha ganacsatada, qaybtaan waxaad ka heli doontaa warar iyo macluumaad tayo leh.
Sida iskaa-u-shaqayste loogu diwaangeliyo Lambarka Bulshada
by Encarni Arcoya samee Bilaha 2 .
Waxaa maalinba maalinta ka danbaysa soo badanaya in dadku ay iskood u shaqeystaan ​​halkii ay shaqo ka raadsan lahaayeen. Ganacsiga,…
Qaabka 111: maxaa loogu talagalay?
by Encarni Arcoya samee Bilaha 7 .
Wakaalada canshuuraha waxaa jira noocyo badan oo foom ah oo la buuxinayo. Hal qof maaha inuu wada yaqaanno, sida ...
Maalgelinta cilmi nafsiga
by Casudi casals samee Sannadka 1 .
Xidhiidhka dadku la leeyahay adduunka wuu ka duwan yahay xaalad kasta. Guud ahaan, si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaar ...
Bulshada rayidka ah
by Encarni Arcoya samee 2 sano .
Marka ay timaado waqtigii aad shaqada bilaabi lahayd, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad u sameyso qof kale ama kaligaa. Y,…
Shirkad iskaa u shaqeysato
Tirada shirkadaha iskood u shaqeysta ma ahan wax loo yaqaan iskii u shaqeysta ama shaqaaluhu sameeyo ...
Sinnaanta, dhammaan wixii ku saabsan sida ay u shaqeyso
by Casudi casals samee 2 sano .
Sinnaanta waxaa loo aasaasay inay tahay qiimaha guud ee shirkad ay ka jarayso deynteeda hantideeda. Magac ahaan,…
Eex iyo dabinno nafsi ah markii la bilaabayo ama maalgashi lagu samaynayo ganacsiga
Maalgelinta ama waxqabadka waxay ku lug leedahay wax ka qabashada shucuurteena. Qeybtaas dabiiciga ah ee naga dhigtay inaan ubaxno sida aadanaha ...
Maalgelinta otomaatiga ah
by Jose recio samee 3 sano .
Shirkadaha ka shaqeeya qeybta baabuurta ayaa soo bandhigay dalab cusub oo ku wajahan shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah si ...
Maalgelinta naadiga golf: waa bedel aad u faa'iido badan
Ka mid ahaanshaha naadiyada golf-ka ayaa isbeddel keenaya, sida ay qabaan aqoonyahannada cilmiga bulshada, waxa xubnahoodu isku dayaan waa inay dareemaan ...
Maxay tahay sababta loo barto shahaadada Maamulka Ganacsiga kahor intaadan bilaabin?
Haddii aad hayso fikrad ganacsi oo aad rabto inaad fuliso, waxaad horayba uga mid tahay kooxdaas gaarka ah ee dadka ...
Sida loo maalgeliyo bilowga dibadda
Bilowgu waa shirkad cusub oo la abuuray oo suuq gaynaysa wax soo saarka iyo / ama adeegyada iyada oo loo marayo adeegsiga degdegga ah ee teknoolojiyadda ...
Warshadaynta iyadoo la tixraacayo oo aan loo baahanayn, sidee u shaqaysaa?
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wax ku saabsan Proforma Invoice
Aragtida sinnaanta awoodda wax iibsiga (PPP)
Xadka Faa’iidada iyo Waqtiga kama dambaysta ah
Xogta loo baahan yahay si loo sameeyo qaansheegad